Budata Convair 580 FSX - Rikoooo
downloads 14 449
The Convair CV-580 bụ a akakabarede si Convair CV-340 ma ọ bụ CV-440 ugbo elu na abụọ Allison 501 D13D / H turboprop engines na ebe nke pistin engines, otu ikpọ vetikal nku azu na gbanwetụrụ kehoraizin stabilizers. The tọghatara e rụrụ site Pacific Airmotive na nnọchite nke Allison Engine Company.
Onye Nwe FSX ihe osise nke Convair 580. Etu ederede. VC arụ ọrụ zuru oke arụpụtara ọrụ na Convair 240 VC. Ezigbo ụgbọ elu-arụ ọrụ na arụmọrụ. Ihe ngosi zuru oke gụnyere steepụ nke na-echekwa onwe ya. Autor: "Anwara m ijide mmụọ nke ornery, ochie, turbo-prop." Ugbo ala ato tinyere nkpuru osisi vaịn, North Central Airlines, Frontier Airlines, na ndi nkwekọrịta ugbo ala ugbu a, DHL.